Inye ọgwụ enyemaka mbụ
Ọ dịghị ihe ọ bụla dị egwu karịa iyi egwu nwa ahụ. Otú ọ dị, ọtụtụ ndị nne na nna amaghị otú e si akpa àgwà n'ọnọdụ mberede. Ka anyị chọpụta ihe mbụ bụ ọgwụgwọ mbụ na otu esi enye ya nwatakịrị ahụ?
Ọnọdụ ọ bụla siri ike chọrọ mmezi ngwa ngwa na omume ziri ezi. Tupu ị na-akpọ ụgbọ ala, ndị nne na ndị nna chọrọ ịghọta ihe na-etinye ndụ nwatakịrị egwu ma wepụ nsogbu a.
O doro anya na, mgbe ụbụrụ na-amaghị ihe ọ bụla, ọ dịghị enwe ume ma ọ bụ iku ume, ọ dịghị mfe inyere nwata aka. O di nkpa inwe ike ichikota ndi mmadu na-achoputa ndi mmadu, na nke a, enwere ike izizi gi ihe omumu nke ndi nlere anya. Ma n'oge ikpe na-adịghị njọ, iji nwee ike iwelata nhụjuanya nke nwatakịrị na-adị ngwa ngwa ma dị mfe.
Isi mba ọzọ
Ahụhụ ọzọ, nke dara n'ime ọnya ahụ, na ntị ma ọ bụ akụkụ nke iku ume na-apụghị ịbịpụtara onwe ya.
Ọ bụrụ na nwatakịrị ahụ kụrụ aka, mee ya ụkwara. Iji mee nke a, jiri nwayọọ nwayọọ mee ka nwa ahụ pụọ n'ọnọdụ ahụ, guzo, na-ejide afọ ya. N'ihe niile, agbanyela ụmụ gị n'akụkụ ma gharakwa ịma jijiji. Nke a na-enyere aka mgbe ụfọdụ, ma ọ na-eme ka ụbụrụ cervical na usoro nhụjuanya nke bụ isi mebie. Ịnweghi ike ịkụ aka azụ n'azụ - ya mere ị nwere ike ịmịnye ahụ ọzọ n'èzí.
A ghaghị itinye nwa ahụ n'ime afọ, ma jide isi ya, kpatụ ya na azụ. Nwatakịrị meworo okenye na-ehulata ikpere ya ma kpatụ azụ.
Ọ bụrụ na ọbara na-agbapụta ma ọ bụ na-apụ na ọnya ahụ, ọ dị mkpa iji mmiri dị ọcha na ncha kpochapụ ebe ahụ mebiri emebi, jiri ya na perogenide hydrogen, miramistin ma ọ bụ antiseptic ọzọ, tinye akwa bandeeji. Echefu banyere iodine (ọ na-ere ọnyá ma na-etinye ọgwụ ngbochi na-adịghị mma) na zelenka (ọ na-agbachapụ akpụkpọ ahụ).
Ọ bụrụ na nwatakịrị ahụ nwere ọbara na-agba ume, ọ dị gị mkpa ime akwa mgbochi pụrụ iche ma tinye ya na ọnya ahụ (bandaji na-adịghị mma maka nzube ndị a), tinye akwa bandeeji n'elu (ka a ghara inwe mgbagwoju anya na njem nlegharị ahụ!). Ọ bụrụ na ọbara ahụ na-aga, ịnwere ike itinye mgbakwunye ọzọ n'elu nke mbụ, ma ọ kachasị 3 bandeeji! Dị ka a na-achị, nke a ezuola.
Mgbe a kwụsịrị ọbara na ọnya ahụ agbakwunyere, ị ga-akpọrọ nwa ahụ gaa ụlọ mberede ahụ.
Ọ bụrụ na isi mmiri na-eti mkpu site na ọnya ahụ, ọ pụtara na akwara na-emebi ma ghara ime ya n'emeghị njem nlegharị. Ọ bụrụ na ịgaghị akwụkwọ pụrụ iche, na njem nlegharị ahụ dị mkpa, cheta na:
- Tinye ntinye njem gaa na nke atọ nke ubu ma ọ bụ n'elu nke atọ nke apata ụkwụ (mana mgbe niile n'elu ọnya ahụ);
- I nweghị ike itinye onye na-eme njem nlegharị anya na uwe onye uwe ya na ahụ gba ọtọ, tinye ákwà dị mkpa n'okpuru nlegharị anya;
- Ke ini etuep, a na-etinye ọkụ ahụ maka minit 30, n'oge okpomọkụ - maka otu awa.
Ọ dị mkpa ka ị dekọọ oge ahụ. Ogologo oge itinye aka na njem ahụ nwere ike ime ka akụkụ ahụ ghara ịnwụ. Ọ bụrụ na nwatakịrị ahụ nwere ọbara site na imi, gwa ya ka ọ gbadaa isi ya ma gbanye mgbanaka oyi ma ọ bụ ice na imi na n'egedege ihu ya, ma ọ bụ karịa 7-10 nkeji. Mkpụrụ obi na-emekarị n'oge a kwesịrị ịkwụsị. Ọ bụrụ na ọ kwụsịrị, gaa dọkịta. Ajụla ịjụ isi gị. Mgbe ahụ, ọbara ga-asọba n'ime afo, nwere ike ime ka ọ gbanwee, mgbe ahụ, kama nke onye edemede, ndị gastroenterologists ga-agbazi nwa ahụ.
Site na mmerụ ihu, otu oyi na njem ngwa ngwa gaa ụlọ mberede ahụ ga-enyere aka!
Anumanu na ụmụ ahụhụ
Ndị dọkịta na-emekarị ka ọ bụrụ "ájá ruru unyi." A na-asa ha, mesoo ya na antiseptic, na ntanye dị ọcha na saịtị ahụ, mgbe nke ahụ gasịrị, ọ ga-ekwe omume gaa dọkịta, ma ọ bụghị naanị agwọ agwọ.
Ha dị oke egwu, anyị kwesịrị ime ihe ngwa ngwa. Ejiri mmaji bandage kachasị mma na mgbakwunye ụkwụ na ntụziaka site n'obi ruo mkpịsị aka. Tinye ice (ọ bụrụ na ọ bụ ọfụma na-etinye ya na anụ ahụ) gaa n'ebe a na-ata nri, nye nwa ahụ udo ma gaa ngwa ngwa na dọkịta na-achọpụta ngwọta ahụ. N'okporo ụzọ, nye nwa ahụ nri dị ukwuu - akụrụ maka iwepu nsị ahụ ga-achọ enyemaka.
Nta nke anu anu nwere ike ime ka ọdachi dakwasị ya, n'ihi ya, ọ dị mkpa iji weta mmiri na saịtị ahụ, iji nye nwata ahụ ka ọ ṅụọ mmiri.
Mite nri nwere ike ịbụ ihe dị ize ndụ. Ụmụ ahụhụ ndị a bụ ndị na-ebu ọtụtụ ọrịa ndị dị ize ndụ, ma karịsịa borreliosis na encephalitis. N'ihi ya, akọrọ ahụ anaghị egbu ahụ, kama ọ na-anọgide na ọnya ma na-anọgide na-aṅụ ọbara. Ọ kacha mma ka nwa ahụ gaa n'ụlọ ọgwụ, ebe dọkịta nwere ahụmahụ ga-ewepụta parasaiti ma gbanye ọgwụ ahụ. Inwe onwe gị na mite nwere ike iji akara aka. Anyị na-atụba ya n'ahụ ahụ nke akọrọ ahụ wee gbanwee ya site na ọnya ahụ na-agbanwegharị ya. Ị pụghị ịhapụ isi nke akọrọ ahụ: ebe ị na-ata, ọ ga-abụ na ọ na-ehicha. A na-ewepu isi dị ka ihe nkedo na-agụnye na agịga. A ghaghị ịṅụ ebe a na-egbu nri.
Enyemaka mbụ na nke ọ bụla ga-adị iche, na ngwọta nke ogo nke anọ nke ọkụ bụ isiokwu naanị ndị dọkịta, adịghị anwa ime ihe ọ bụla n'onwe gị. Akpa, ịkwesịrị iwepu mmetụta nke ihe na-emebi emebi, na okwu ndị ọzọ, wepụ ihe kpatara ọkụ ahụ. Ejila anụ ahụ wepụ anụ ahụ! Hapụ ya, ebe nke a ga-aghọta dọkịta ahụ. Kpoo ebe ahụ dị jụụ. Anesthetizes na-atụ oyi na agaghị ekwe ka mmeri gbasaa n'ime anụ ahụ.
Ọ bụrụ na ọkụ, ọ bụ iji belata ọkụ ebe mmiri na-ekpo ọkụ. Mgbe - tinye nkedo anestetiiki ma tinye akwa bandeeji. Nke mbụ, a na-etinye ụyọkọ dị ọcha nke dị nro n'ebe ọnya ọnya, ọ bụ naanị mgbe a wụsara mmiri na ya. Ọ dị ezigbo mkpa na ọkụ na-enye nwa ahụ mmanya dị jụụ, ọ ga-enyere akụrụ aka ịnagide mkpochapụ nke toxins.
Ihe mgbe mgbe, na ọkụ, njem gaa dọkịta dị mkpa, ya bụ:
- ọ bụrụ na nwatakịrị anatawo ọkụ n'ihu afọ ahụ;
- ire ​​ọkụ;
- ire ​​ọ bụla nke ihu, olu na isi;
- oke ara na umu nwanyi;
- ọkụ nke ikpere ma ọ bụ ikpere ehulata;
- akuku iku ume iku ume;
- anya na-ere ọkụ.
I kwesiri ikpochapu ebe mmanu oku na mmanu ozo, fesa ya na soda ma obu tinye ya na mmamiri. Ọkụ bụ mmeri nke anụ ahụ, nke a na-edozi ma bụrụ onye na-adịghị ike. Na mmamịrị, enwere ike ibute ọrịa, na mgbakwunye, ọ bụghị oyi na agaghị egbochi mmebi anụ ahụ. Mkpụrụ greasy na ointments agaghị ekwe ka akpụkpọ ahụ "na-eku ume", na soda ga-eme ka mmetụta mmerụ ahụ mụbaa.
Ejila chemical "antidotes" mee ihe. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-agba ọkụ na acid, ị gaghị awụpụ alkali na ebe a. Nwa ahụ ga-enweta ọkụ abụọ: site na acid na site na alkali.
Mgbe mmiri na-egbu egbu, ị gaghị etinye ihe dị ukwuu ka ị ṅụọ, ma gụọ, ntu oyi, ma ọ bụ mee ka ebe ahụ mebiri emebi. Omume a niile nwere ike ime ka ọ ghara ịnwụ. Iji nagide frostbite, tinye akwa bandeeji (ákwà woolen, dịka ọmụmaatụ) na mpaghara ahụ mebiri emebi (n'ụzọ dị oke n'akụkụ ya!), Nye nwa ahụ na-atọ ụtọ tii ma buru nwa ahụ gaa dọkịta.
Iji chọpụta ogo frostbite, ọ na-ewe site na awa 6 ruo 32. Ma n'ọnọdụ ọ bụla, ọ dị gị mkpa ịhụ dọkịta.
Mgbe ihe ịrịba ama mbụ nke hypothermia na-apụta, nwata ahụ kwesịrị ịmụrụ ọkụ, nye ya tii na nri dị ụtọ, ebe ọ bụ na ahụ dị n'ọnọdụ a chọrọ ume karịsịa iji weghachi.
Ọ kacha mma ka nwa ahụ na-asa ahụ na mmiri nke 36-38 C (ọ bụghị karịa!) Ihe dị ka nkeji iri na ise. Ọzọkwa, nrụgide anụ ahụ na nke uche ga-ejedebe ruo mgbe nwa ahụ ga-enweta ike.
Okpomọkụ, ọrịa strok
Cheta na 38.5 C bụ ọnụ ụzọ nke ahụ na-agbaso ọrịa ahụ. Tupu nke a (na ụmụ ọhụrụ - ruo 38 Celsius C), ekwesighi ime ka ọnọdụ okpomọkụ dị ala. Ọ bụrụ na ọ rịgoro elu, mee ihe. E nwere ọtụtụ ọgwụ ọjọọ, gụnyere ụmụaka, nke ị nwere ike ịkụda okpomọkụ ahụ, ma ọ fọrọ nke nta ka ha nile nwere mmerụ na-adịghị mma na ọbara.
Wunye mmiri na bat ahụ n'ụzọ dị elu karịa otu nrịta dị ala karịa ịgụ nke temometa, mgbe ị tụlechara okpomọkụ na crumbs. Na mmiri, ọ ka mma ịdakwasị otu thermometer Mercury ahụ, ịgụ ya ga-abụ ihe ziri ezi karị. Ọ dịghị mkpa iji bulie mmiri nke mmiri ahụ, ọ bụ ezigbo onye na-ekpo ọkụ na, ma, dịka ọ na-eme ka ọ dị jụụ, ọ ga-ewepu ọkụ ọkụ site na nwa ahụ. 20-30 nkeji, 2-3 ugboro n'ụbọchị.
Mpempe akwụkwọ na akwa oyi na ọkpọiso. Etinyela ice na akpụkpọ anụ na-enweghị nchebe! Ya mere i nwere ike inweta ntu oyi. A na-agbanye ice ahụ na ákwà ma tinye ya ruo minit 10-15, ọ dịghị ọzọ. Na ihichapu, i nwere ike itinye obere okpokoro mmanya.
Iji kechie nwa ahụ, wetụ mpempe akwụkwọ ahụ na mmiri ọkụ - akwụkwọ ahụ ga-ajụkwa oyi, mmiri ahụ, na-ekpochapu, ga-eburu ya ọkụ.
Ka anyi kpochapu mmanya ndi a na-akpo achoro (ndi mmadu ajujughi, mmiri na lemon). Ejila akwa na-arịa ọrịa na-arịa ọrịa ma ghara kechie ya na blanketị. Site n'igwe ma ọ bụ ihe na-asọ oyi, a na-eme ahụ ahụ nwa ahụ site na otu ụzọ ahụ. Gbaa mbọ hụ na ikuku na-agba, kama jide n'aka na nwa ahụ adịghị ada.
N'ikpochapu, dị ka a na-achị, na-agafe n'ime nkeji 5-10, karịa nkeji iri - nke a bụ nfu nke maara ihe na ihe dị mkpa ị ga-akpọ dọkịta ozugbo.
Egbula ịba nwa ahụ n'ime onwe gị site n'enyemaka nke amonia ma ọ bụ ịma jijiji. Ọ bụrụ na ahụ "kwụsịrị" ruo oge dị mkpirikpi, mgbe ahụ, ọ ga-ejikwa nwayọọ "gbanye" azụ. Gịnị ma ọ bụrụ na nwatakịrị ahụ emebie? Beli ukwu ya iji mee ka ọbara na-abanye n'isi.
Gbaa mbọ hụ na ikuku ọhụrụ na-abanye n'ime ụlọ ahụ. Mgbe nwatakịrị ahụ biliri, nye ya tii ụtọ. Ịgba aghara mgbe nile bụ oge iji kọọ dọkịta.
Nsogbu nke afo nwere ike kewaa n'ime ụdị atọ: mmetụ abdominal na-egbuke egbuke, "oke" afọ na nsị. Ihe ịrịba ama nke ọnyá na-adịghị ahụkebe, ndị na-adọkpụ ma na-afụ ụfụ, pallor, mmiri mmiri oyi na-ekpo ọkụ, ume mmiri na-adịghị emetụ, akpịrị ịkpọ nkụ. N'oge ụfọdụ, ọgbụgba na vomiting metụ afọ, ọchịchọ ịbanye n'ogige embrayo nkwado: oyi na afo, udo na ụlọ ọgwụ.
Ihe ịrịba ama mbụ bụ pallor na ọgbụgbọ. 85% nke nsị bụ n'ihi na nwa ahụ riri ma ọ bụ ṅụọ ihe na-ezighi ezi. Rinse afo (iko 3-5 nke mmiri a na-ekpo ọkụ ma ọ bụ ọgwụ ọjọọ)! Mgbe nke ahụ gasịrị, ị nwere ike inye iko mmiri dị jụụ. Ọ bụrụ na nsị ahụ emeela site na traktị na respiratory, ị ga-eme ka nwatakịrị ahụ banye n'ikuku ikuku wee buru dọkịta. Ọ bụrụ na ihe na-egbu egbu abanyewo n'ime ọbara, ọ dị mkpa ka ị mee ka ị na-agbọ vomiting ozugbo, wee nye mmiri dị jụụ.
Ị maghị ihe nwatakịrị ahụ na-egbu? Ị nwere ike ịchọrọ dọkịta ihe atụ nke vomiting. N'eziokwu, ọ bụghị ụlọ ọgwụ nile ga-enyocha ya, ma na ụlọ ọgwụ dị ukwuu ga-eme ka ọrụ dọkịta rụọ ọrụ.
Ọ bụrụ na nwatakịrị ahụ dakwasị isi ya, tinye aka na ebe mmerụ ahụ ruo minit 10-15 ka ọ na-ejikwasị n'arịa nke ice.
Nwa ya enweghi ike ma ọ bụ ele anya na ọ furu efu, gosipụtara mmegharị ahụ, ọ naghị enwe nsogbu na ọgbụgbọ na isi ọwụwa? Kpọọ ụgbọ ala ma na - ele anya maka akụkụ nke akụkụ iku ume ya .Ọ bụrụ n'amaghị ama, tinye ihe ahụ dị n'akụkụ ya nke mere na ọ dịghị emerụ ahụ na mberede.
Ebe ọ bụ na enweghi X-ray, ọbụlagodi na mgbawa adịghị emeghe, ọbụna dọkịta nwere ahụike apụghị ikpebi ma ọ bụ enweghị nkwarụ, ndị nnapụta na-eji otu iwu: ọnyá ọ bụla bụ ihe mgbagwoju anya. Ya mere, ị ghaghị ịkpachara anya:
- dịka aka agbajiri aka, mee ya, na-enweghị ịgbanwe ọnọdụ ahụ;
- dozie nkwonkwo niile n'otu njikọ n'elu na n'okpuru mgbawa;
- ma ọ bụrụ na enweghi taya pụrụ iche, mgbe ahụ, a ga-enwe ihe dị nro (owu na-acha ọcha, ákwà) n'agbata oghere (usoro siri ike) na ụkwụ ma ọ bụ n'aka;
- na-agbaji ọgịrịga na bandeeji na-ekpo ọkụ. Otú ọ dị, cheta na ọ dị mma ịtụkwasị aka na ụkwụ, dozie collarbone kwụsịrị, spine na okpokoro isi nwere ike mụta naanị na nkuzi pụrụ iche. N'iji oghere na-emeghe, buru ụzọ kwụsị ọbara ahụ, dozie ọnyá ahụ.
Ahụhụ ọ bụla bụ nrụgide, nke pụtara na ujo nwere ike ime n'ọnọdụ ọ bụla. A ga-ejide ọgwụ enyemaka ọ bụla ọbụla na ọgwụ ọjọọ:
- Kpo nwa (kpuchie ya ma nye ya ihe ọṅụṅụ na-ekpo ọkụ);
- gwa nwa ahụ merụrụ ahụ okwu n'olu nwayọ, nwayọ na obiọma.
Na nnukwu ihe ijuanya, enyela ụmụaka ndị na-eto eto, ihe mmeghachi omume nwere ike ịbụ enweghị atụ. Nke a ga - eme dọkịta ọkachamara, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
N'ụwa nile, ụkpụrụ nke usoro ọgwụgwọ mbụ nke Red Cross kwadoro dị irè. Onye ọ bụla nwere ike ịmụta banyere ha na nkuzi pụrụ iche, ebe ha na-amụta ime ihe n'ụzọ ziri ezi na ngwa ngwa n'ọnọdụ ndị siri ike, na-eme ihe ndị manikins nwere nke nwere mmetụta ma na-enweta isi ihe dị n'ime ahụ.
Mkpesa na ọrịa
Mgbochi maka ịdọgbu ụmụaka n'ahụ
Kedu ihe m nwere ike inye iji rie mgbe nsị?
Ịhịa aka n'ahụ na mmega nwata maka otu afọ
Kedu afọ ole ị nwere ike ịhịa aka nwa?
Nwa na-enweghi ibu
Ọrụ nke agụmakwụkwọ nkịtị na mmepe nwatakịrị ahụ
Eggplants na-esite na Tomato
Ihe ị ga-eme maka Afọ Ọhụrụ naanị: anyị na-ezukọ ezumike ahụ n'ọnọdụ dị mma
Olee otu esi ahọrọ oven nke nwere onwe ya
Mịtọụ na ụmụntakịrị
Actress Ekaterina Kopanova
Achịcha na tomato a mịrị amị
Ọrịa na-ebute site ná mmekọahụ
Pizza "Ehee Anọ"
Anụ ọka na-ejupụta na mọstad
Nri achicha French
Caviar si na akwụkwọ nri
Foto nke nwanyị azụmahịa taa
Chicken weere akwụkwọ nri French
Esi esi họrọ pan nke frying na mkpuchi osisi
Nri ọgwụ maka ọrịa dị iche iche
Egwuregwu egwu, egwuregwu oyi